ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ ဟူဂိုချားဗက်ဇ် ကွယ်လွန် (၅၈နှစ်) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ ဟိုဂို ချားဗက်ဇ် (Hugo Chavez) ဟာ အချိန်အတော်ကြာ ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရတဲ့နောက် အင်္ဂါနေ့က ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဂို ချားဗက်ဇ် ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာကို ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရပိုင် ရုပ်သံကနေ အင်္ဂါနေ့မှာ ဒုသမ္မတ နီကိုးလတ်စ် မဒျူရို (Nicolas Maduro) က ကြေညာသွားပါတယ်။
This entry was posted on March 7, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၅)
Rohingya History Watch this video to listen to all Myanmar nationals rohingyas history →